Talo walaalnimo oo ku wajahan Boqor Buurmadow | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar, ayaa ka mid noqday, siyaasiyiinta codkooda ku biirinaya in Buurmadow, raalli galin ka bixiyo hadal dad badan gaf u arkeen oo uu ku taageeray Kooxda Al-Shabaab.
Yuusuf, wuxuu sheegay in Buurmadow, ay ku waajibtay bixinta raalli-galin, kadib markii si laga xishoodo uu ugu gafay, dwladda Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelada dadka faraha badan ee Al-Shabaab dileen.
Sidoo kale, Wasiirka Waxbarashada, Cabdullaahi Carab, [Saaxiibka Ra’iisul Wasaaraha] oo Buurmadow, garab taagnaa xilligii uu oranayay hadalka la dhibsaday ayuu ugu baaqay, inuu aragtidiisa caddeeyo.
Hadalka gafka iyo digashada ah, ee hadal heynta abuuray, ayaa Buurmadoow, ka soo yeeray Ibuucii hore, wuxuuna sheegay in koofurta Soomaaliya ay ka jirto labo dowlad, [Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka] isla-markaasna kaliya shaqsiyaad isaga ku qabiil [DIR] ah ay xukumaan Kooxda Al-Shabaab, wuxuu naxariis u rajeeyay Axmed Gudane.
Hoos ka aqriso qoraalka Yuusuf Garaad Cumar.
“Talo walaalnimo oo ku wajahan Boqor Buur - Madow iyo Madaxda garab taagnaa. Bani’aadamku wuu khaldamaa, laakiin waa in uu isa saxaa. Wax kaftan gala iyo wax kale ayaa kala jira”.
“Haddii ay xog-ogaalnimo darro u geysay iyo haddii kaleba Boqor Buur - Madow waxaa ku waajibay in uu la noqdo hadalkiisii ahaa in ay Soomaaliya ka jirto laba Dowladood oo midkood ay tahay Shabaab”.
“Waxaa la gudboon in uu raalli-gelin ka bixiyo erayadiisii oo anigu aan u arko in ay qadaf ku yihiin Dowladda Soomaaliya, dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelada dadka faraha badan ee Shabaab dilay, kuwa uu naafeeyay iyo beel-weynta Soomaaliyeed ee sharafta badan ee uu magaceeda ku sidkay arga-gixisnimo”.
“Afkooda kama maqal, laakiin Mas’uuliyiinta garbaha ka taagnaa, oo midkood uu xubin ka yahay labada Gole ee dalka ka arrimiya, anigu ma qabo in ay Boqorka isku fikrad ka yihiin aragtidaas”.
“Wasiirka waxaan u soo jeedin lahaa in uu iska beri yeelo ereyada culus ee aanuu oran laakiin garab istaaggiisa loo macneyn karo ka raalli ahaashada iyo shabbadda Xukuumadda”.